बर्षाको बबाल ‘चौका दाउ’ ! | Sagarmatha TVSagarmatha TV बर्षाको बबाल ‘चौका दाउ’ ! | Sagarmatha TV
मङ्लबार, असार ३, २०७६
बर्षाको बबाल ‘चौका दाउ’ !
आइतवार, भदौ १७, २०७५
काठमाडाैं । हास्यकलाकारहरुको बाहुल्यता रहेको कमेडी फिल्म ‘चौका दाउ’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘राधा पियारी…’ बोलको गीतमा चर्चित संगीतकार तथा गायक शम्भुजित बास्कोटाले स्वर भरेका छन् । हालै राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच चलचित्रको गीत सार्वजनिक भएको हो ।
गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरु वर्षा राउत, विल्सन विक्रम राई, तैयव शाह, रविन्द्र झा, सन्तोष पन्तका साथमा भिमफेदी गाइजलाई प्रस्तुत गरिएको छ । उनलाई गायनमा कोमल राजभण्डारीले साथ दिएकी छन् । श्रीपुरुष ढकाल र दयाराम पाण्डेको शब्द रहेको गीतमा गायक बास्कोटा स्वयमको संगीत रहेको छ । गीतको भिडियोमा फिल्मका लिड कलाकारहरु फिचर्ड छन् । कलाकारहरु विल्सन विक्रम राई, सन्तोष पन्त, रविन्द्र झा अभिनेत्री बर्षा राउतलाई ‘राधा पियारी’ भन्दै पछि परेका छन् । गीतमा बर्षाका लागि मरिहत्ते गर्ने युवा र अर्धबैशे पुरुष पात्रहरुको चरित्र चित्रण गरिएको छ ।
लोक फ्लेवरमा तयार पारिएको गीतले फिल्मको मूल कथा प्रस्ट्याएको निर्देशक पुर्नेन्दु झाले बताए । यसमा संगीतकार बाँस्कोटाको कथा छ । उक्त फिल्ममा तैयव शाह, निर्मल शर्मालगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । सौर्यजित बाँस्कोटा र मनोज राजभण्डारीको निमार्ण रहेको यो फिल्मलाई दिर्घ गुरुङले खिचेको हुन । ‘चौका दाउ’ मा भिमफेदी ग्याइजको कोरियोग्राफी र मित्र डि.गुरुङको सम्पादन रहेको छ ।
रोल्पाको त्रिवेणीमा यातायात, विद्युत, इन्टरनेट पुग्यो तर खानेपानी पुगेन : भान्सा देखि शौचालय जानसमेत समस्या
लोकसेवाको अनलाइनमा समस्या,परीक्षार्थीबाट आयोग कार्यालय घेराउ
प्रेसर कुकर बम नेपाली सेनाबाट निश्क्रिय
प्रचण्ड सार्वजनिक भएको १४ वर्षमा माओवादी नै विलायो
घट्यो पेट्रोल र डिजेल र मटितेलको मूल्य
उपत्यकामा चोरको बिगबिगी,चोरदेखि सावधान
कोसीमा ‘पाइलट च्यानल’ खन्दै भारत, स्थानीय त्रसित
ऋण काढेर यार्सा टिप्न गएकाहरु निराश बनेर भारततर्फ
सिंहदरबारभित्रको हेल्थ डेस्कमै अत्यावश्यक औषधि अभाव
गुठी विधेयक सच्याउन नेकपा नेताहरूको दबाब
ललितानिवास जग्गा प्रकरण : अनुसन्धान नसकिएपछि दुई महिना थप्न प्रस्ताव
काठमाडौँको तापक्रम ३३.५ डिग्री, अब कति बढ्छ ?